ရကွေီးပွီး ဖွဈတတျသောရောဂါမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရကွေီးတဲ့အခါ မွငျ့တကျလာတဲ့ ရပွေငျကွီးနဲ့ အတူ စိုးရိမျစိတျတှေ သောကတှလေညျး တူတူမွငျ့တကျကွရစမွဲပါ။ အဝေးက စာနာပေးရသူတှအေတှကျတောငျ ပူလောငျလှတဲ့ ‘ရဘေေး’ ဟာ ‘ရေ’ကသြှားရငျတောငျ ဆကျမွငျ့တကျဒုက်ခပေးနမေဲ့ပွဿနာတှေ ဘကျပေါငျးစုံမှာ ရှိနပေါသေးတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဒီလို ကနျြးမာရေးပွဿနာတှကေ ဆကျဒုက်ခပေးနတေတျပါတယျ။
▪ရမေသနျ့ အစားအသောကျမသနျ့နိုငျတဲ့ အခွအေနကွေောငျ့ အူရောငျငနျးဖြားရောဂါ၊ ကာလဝမျးရောဂါ၊ leptospirosis ရောဂါနဲ့ အသညျးရောငျအသားဝါ(အေ) အမြိုးအစားရောဂါတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
▪နရောထိုငျခငျး မသနျ့ခွငျး လြှျောဖှတျဖို့ အဝတျအစားမသနျ့ခွငျး ကွောငျ့ အရပွေားမှာ ယားနာရောဂါအမြိုးမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
▪စိုစှတျအေးမွတဲ့ အခွအေနနေဲ့ စိတျဖိစီးမှု လူပငျပနျးမှုတှကွေောငျ့ ကိုယျခံအားကဆြငျးတတျတာမို့ အအေးမိခွငျးနဲ့ ရာသီတုပျကှေးလိုရောဂါတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။
▪ခွငျတှပေိုပေါကျဖှားဖို့ အခွအေနပေေးတာမို့ ခွငျကတဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ၊ ငှကျဖြားရောဂါနဲ့ ဆငျတုပျကှေးလို ရောဂါမြိုးတှေ ပိုဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
? မတျောတဆ ထိခိုကျမှုမြား
ရကွေီးနစေဉျမှာ ပိုဖွဈနိုငျပမေဲ့ ရကွေီးပွီးပွနျလညျထူထောငျရေးလုပျရတဲ့ ကာလမှာလညျး ပုံမှနျမဖွဈသေးတဲ့ မွပွေငျအခွအေနေ ပတျဝနျးကငျြအခွအေနကွေောငျ့ မတျောတဆမှုတှေ ထိခိုကျရှနာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ စိုစှတျပွီး မသနျ့ရှငျးတဲ့ အခွအေနလေညျးဖွဈတာမို့ အနာပိုးဝငျဖို့ ပွညျတညျဖို့ ပိုလှယျကူစပေါတယျ။
ရကွေီးတုနျးမှာ ပါလာပွီး တငျကနျြနခေဲ့တတျတဲ့ မွှေ ၊ ကငျး နဲ့ အခွား အဆိပျရှိသတ်တဝါတှေ အန်တရာယျလညျး ရှိတာမို့ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။
? စိတျကနျြးမာရေး ပွဿနာမြား
ရစေကွီးကတညျးက စဖွဈရတဲ့ စိုးရိမျကွောကျလနျ့မှု၊ နရောထိုငျခငျးအသဈတှနေဲ့ ကယျဆယျရေးစခနျးတှမှော နသေားမကအြဆငျမပွမှေု၊ အသကျ အိုးအိမျ စညျးစိမျ ဆုံးရှုံးမှုတှကေ ရဘေေးသငျ့သူတိုငျးကို စိတျပိုငျးဆိုငျရာဝဒေနာတှေ ဖွဈကနျြနစေတေတျပါတယျ။
နဂိုစိတျပိုငျးဆိုငျရာကွံ့ခိုငျသူ၊ စိတျပိုငျးရောရုပျပိုငျးပါ ပံ့ပိုးမှု လုံလောကျစှာရသူတှေ၊ အဆုံးအရှုံးမကွီးမားခဲ့သူတခြို့တှမှော ထိခိုကျမှု နညျးနိုငျပမေဲ့ လူတျောတျောမြားမြားမှာတော့ စိတျဖိစီးမှုရဲ့ နောကျဆကျတှဲပွဿနာတှေ၊ Depressionဆိုတဲ့ စိတျကရြောဂါ ၊ Anxiety ဆိုတဲ့အစိုးရိမျလှနျရောဂါနဲ့ Post Traumatic Stress Disorder လို ပွနျပြောကျဖို့ခကျတဲ့ စိတျဒဏျရာဝဒေနာတှေ ဆကျဖွဈသှားတတျပါတယျ။
နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးမှုတှေ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပံ့ပိုးမှုတှပေါ လုံလောကျအောငျပေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ရေကြီးတဲ့အခါ မြင့်တက်လာတဲ့ ရေပြင်ကြီးနဲ့ အတူ စိုးရိမ်စိတ်တွေ သောကတွေလည်း တူတူမြင့်တက်ကြရစမြဲပါ။ အဝေးက စာနာပေးရသူတွေအတွက်တောင် ပူလောင်လှတဲ့ ‘ရေဘေး’ ဟာ ‘ရေ’ကျသွားရင်တောင် ဆက်မြင့်တက်ဒုက္ခပေးနေမဲ့ပြဿနာတွေ ဘက်ပေါင်းစုံမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီလို ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက ဆက်ဒုက္ခပေးနေတတ်ပါတယ်။
▪ရေမသန့် အစားအသောက်မသန့်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကြောင့် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ leptospirosis ရောဂါနဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ(အေ) အမျိုးအစားရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
▪နေရာထိုင်ခင်း မသန့်ခြင်း လျှော်ဖွတ်ဖို့ အဝတ်အစားမသန့်ခြင်း ကြောင့် အရေပြားမှာ ယားနာရောဂါအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
▪စိုစွတ်အေးမြတဲ့ အခြေအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု လူပင်ပန်းမှုတွေကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းတတ်တာမို့ အအေးမိခြင်းနဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးလိုရောဂါတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
▪ခြင်တွေပိုပေါက်ဖွားဖို့ အခြေအနေပေးတာမို့ ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ ဆင်တုပ်ကွေးလို ရောဂါမျိုးတွေ ပိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
? မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ
ရေကြီးနေစဉ်မှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ရေကြီးပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ရတဲ့ ကာလမှာလည်း ပုံမှန်မဖြစ်သေးတဲ့ မြေပြင်အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် မတော်တဆမှုတွေ ထိခိုက်ရှနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိုစွတ်ပြီး မသန့်ရှင်းတဲ့ အခြေအနေလည်းဖြစ်တာမို့ အနာပိုးဝင်ဖို့ ပြည်တည်ဖို့ ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။
ရေကြီးတုန်းမှာ ပါလာပြီး တင်ကျန်နေခဲ့တတ်တဲ့ မြွေ ၊ ကင်း နဲ့ အခြား အဆိပ်ရှိသတ္တဝါတွေ အန္တရာယ်လည်း ရှိတာမို့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
? စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ
ရေစကြီးကတည်းက စဖြစ်ရတဲ့ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှု၊ နေရာထိုင်ခင်းအသစ်တွေနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ နေသားမကျအဆင်မပြေမှု၊ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ဆုံးရှုံးမှုတွေက ရေဘေးသင့်သူတိုင်းကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေ ဖြစ်ကျန်နေစေတတ်ပါတယ်။
နဂိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်သူ၊ စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းပါ ပံ့ပိုးမှု လုံလောက်စွာရသူတွေ၊ အဆုံးအရှုံးမကြီးမားခဲ့သူတချို့တွေမှာ ထိခိုက်မှု နည်းနိုင်ပေမဲ့ လူတော်တော်များများမှာတော့ စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ၊ Depressionဆိုတဲ့ စိတ်ကျရောဂါ ၊ Anxiety ဆိုတဲ့အစိုးရိမ်လွန်ရောဂါနဲ့ Post Traumatic Stress Disorder လို ပြန်ပျောက်ဖို့ခက်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာဝေဒနာတွေ ဆက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေပါ လုံလောက်အောင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။